Aix Arome Cafe Ny Kafe - Famolavolana
Alahady 17 Oktobra 2021
Ny Kafe Ny kafe izay ahitan'ny mpitsidika ny fifaneraserana amin'ny ranomasina. Ny firafitry ny atody lehibe dia napetraka ao afovoan'ny habaka dia miasa toy ny mpamatsy kafe sy ny famatsiana kafe. Ny endrika endrika kisary dia aingam-panahy amin'ny voanjo kafe sy maizim-bolo. Rantsam-baravarana roa lehibe eo an-tampon'ny andaniny sy ny "bean lehibe" dia loharanon'ny fitrandrahana sy hazavana voajanahary. Ny kafe dia nanome latabatra lava toy ny valan-javamaniry sy ny banga. Ny chandelier toa mihantona tampoka dia mitovy amin'ny fijerin'ny trondro amin'ny rano, ny hazavana mamirapiratra dia manintona ny tara-pahazavana avy amin'ny lanitra fotsy lehibe.
Anaran'ny tetikasa : Aix Arome Cafe, Anaran'ny mpamorona : One Plus Partnership Limited, Anaran'ny mpanjifa : Aix Arome Coffee Co. Ltd..
Zoma 15 Oktobra 2021
Superegg Ny Fametahana Sary Sokitra Alahady 17 Oktobra
Bionyalux Care Fonosana Hoditra Asabotsy 16 Oktobra
Firo Fahandroana Afo Zoma 15 Oktobra
Fanadihadihana famolavolana ny andro Alahady 17 Oktobra
Tantara momba ny andro Asabotsy 16 Oktobra
Famolavolana ny andro Zoma 15 Oktobra
Mpamorona ny andro Alakamisy 14 Oktobra
Ekipa mpamorona ny andro Alarobia 13 Oktobra
Ny Kafe One Plus Partnership Limited Aix Arome Cafe